Shiinaha Silicone Jikada Alaabta Warshadaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Walxaha silikoonku aad iyo aad bay caan uga yihiin adduunka oo dhan hadda. Iyada oo ay ka faa'iideysato samaynta maaddada silikoon ee fasalka cuntada iyo awoodda u lahaanshaha heerkulka laga bilaabo -50 ilaa +300 digrii Fahrenheit, dadku waxay abuuraan waxyaabo badan oo ku habboon in lagu isticmaalo Jikada.
Walxaha silikoonku aad iyo aad bay caan uga yihiin adduunka oo dhan hadda. Iyada oo ay ka faa'iideysato sameynta maaddada silikoon ee heerka cuntada iyo awoodda u lahaanshaha heerkulka laga bilaabo -50 illaa +300 digrii Fahrenheit, dadku waxay abuuraan waxyaabo badan oo ku habboon in lagu isticmaalo Jikada.
Waxaan nahay hadiyado qurxoon oo dhalaalaya waxaan haysannaa waxyaabo badan oo jira sida weelasha silikooniga ah iyo taargooyinka, dermaha saxanka silicone, dhalooyinka silikoon, furfurayaasha weelka silikooniga, malqacadaha silikoon, duuliyeyaasha silikoon, godadka silikoon, burushyada nadiifinta silikoon iyo wixii la mid ah. Marka laga reebo shaqooyinka, astaamaha waxaa lagu samayn karaa alaabta jikada silikooniga ah ee kor u qaadista, xayeysiinta, ganacsiga iyo hadiyadaha iyada oo la daabacayo, lagu xardhay ama lagu dhajiyay midabyo ama aan lahayn. Kooxdayada farsamo ee xirfadda leh waxay isku dayayaan inay abuuraan waxyaabo badan si ay u daboolaan baahida macmiilka. Naqshadaha la habeeyay ayaa la soo dhaweynayaa wakhti kasta. Waxaan ku kalsoonahay in alaabta jikada silikoonku ay waxtar u yeelan doonaan kordhinta ganacsigaaga.
Qalabka: Qalabka silikoon
Hore: Koobabka Laabista Silikoon
Xiga: Silikoon Kuwo kale
LED musmaarradii biinanka